Dad barakacayaal ah oo deggan kaamka Shabeelle, Garoowe oo ka cabanayo duruufo nolol xumo iyo xannuuno la soo gudboonaaday. – Radio Daljir
Dad barakacayaal ah oo deggan kaamka Shabeelle, Garoowe oo ka cabanayo duruufo nolol xumo iyo xannuuno la soo gudboonaaday.
Maajo 22, 2011 12:00 b 0
Garowe, May 22 – Dad barakacayaal deggan kaam ku yaalla duleedka magaalada Garoowe oo lagu magacaabo Shabeelle ayaa ka cabanayo dhibaatooyin nolol xumo iyo xanuun soo food saaray toddobaaddadii ugu danbeeyey.
Kaamkaan oo ay booqdeen wariyaasha idaacadda Daljir ayey kula soo kulmeen dadka deggan kalena sheekaysteen xaadahooda kala duwan, iyagoo sheegtay in ay soo wajaheen daruufo ad-adag oo xagga caafimaadka u badan, xilligaan oo lagu jiro wakhti roobaadkii gu-ga.
Daruufaha dadkaan haysta waxaa ay sii laban-laammeen kaddib markii roobab xooggan ay ka da’ay magaalada Garoowe iyo deegaannada ku hareeraysan, kuwaasi oo cunjuqiyey cooshadihii ay degganaayeen qaar kalena cagta mariyey.
Kaamka Shabeelle oo ay deggan yihiin barakacayaasha cabashada muujinaya waxaa uu ku yaalla duleed waqooyi ee magaalada Garoowe, waxaana uu dhax-yaallaa togga xilli roobaadkasta ay maraan mawjado biyo ah oo ka soo butaaca qaar ka mid ah dooxooyinka gobolka Nugaal.
Cali Cabdicasiis Ducaale’
?Waxaan rabnaa in aan ka dhigno Gaalkacyo mid la mid ah Puntland inteeda kale, mana loo dulqaadanayo budhcad badeed siday doonto u dhex marto magaalada” Xeer ilaaliye.
Labada Shariif oo mar 3-aad kulmay, kuse kala kacay fadhigii.